DHEGEYSO-Ciidanka ammaanka gobolka Bari oo qabtay kooxo solarada furfurta. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Ciidanka ammaanka gobolka Bari oo qabtay kooxo solarada furfurta.
Febraayo 19, 2017 3:03 b 0
Boosaaso, Feb 19 2017-Ciidamada booliska ee Bossaso ayaaa gacanta ku dhigay ilaa shan qof oo lagu soo eedeeyey inay batariyo kala baxeen layrarka soolaraha ee cadceeda ku shaqeeya ee wadooyinka magaalada Bosaaso iyo dad ka gacansanayay.
Ragan ayaa lagu xiray salhdiga bartamaha ee magaalada Bosaso , waana markii ugu horaysay oo ay ciidamadu soo qabtaan dad furfuranaya layrarka cadceeda ku shaqeeya, Maxamud Cabdi Ibraahim ayaa arintaan ka waraystay Cabdli Cali Muuse oo ah taliye kuxigeenka saldhiga bartamaha ee Boosaaso.
DHEEGYSO-Gudiga gurmadka abaaraha gobolka Mudug oo Alminhaaj lacag ka gudoomey